Furtuuwwan qaxxaamuraa ajajawwan LibreOfficetiif gulaala yookin ramada.
Furtuuwwan qaxxaamura fayyadama ammeetiif yookkiinfayyadamtootaLibreOfficemaraaframaduuyoo kiin gulaauu nidandeessa.
Ramadd furtuuwwan qaxxaamura yeroo dhi ho sirnadala keetiin fayy adan haqi.
Furtuwwan qaxxaamuraa fayya damtootaLibreOffice maraaf waliinii agarsiisa.
Barreessaa Calc Impressi Fakkasa Herreega
Furtuuwwan qaxxaamura fayyad amaLibreOffice ammeef agarsiisa.
Furtwwan qaxxaamuraafiajajawwan firooman tarressa. Furtuu qaxxaamuraa ajaja tarree Faankishinii keessaatti filatameef ramaduuf ykn fooyyessuuf, tarree kana keessatti qaxxaamura cuqaasi, ittaansuudhaan Fooyyessii cuqaasi.
Akaakuuwwan dalagaa fi dalagawwan gara fur tuuwwan qaxxaamuraa ramaduu dandeessutti tarreessa
Akaakuuwwan dalaga jireessaa tarreessaa. Qaxxaamura gara Haalatootatti ramaduuf, akaakuu "Haalatootaa" bani.
Dalaga furtuu qaxxaa muraa ramaduu barbaadde fili, waliin makiinsa furtuu tarree furtuwwan qaxxaamura keessaa cuqaasi, ittaansuudhaan Foyyessii cuqaasi.Dalagni filatame yoofurtuu qaxxaamuraa dursee qabadaate, tarree Furtuuwwan keessaatti agarsiifameera.
Furtuuwwan qaxxaamuraa dalaga filatameetti rama daman agarsiisa.
Furtuu walmakiinsaa Furtuuwwan qaxxaamuraa keessatti filataman gara ajaja tarree Faankishinii keessatti filametti tarressuu ramada.
Maalimaookiin maalimoo tafilatamanii dhu goomsuun hin barbaadne haqa.
Qindaayina furtuulee qaxxaamuraa kan duraan olkaa'ameen bakka buusa.
Qindaayina furtuulee ammee olkaa'a, kanaaf atis booda fe'achuu dandeessa.
Gatii fooyya'ee gara gatii durtiitti haaromsa.
Title is: Gabatee aiqoo